China mashandisiro eropa lancet vagadziri uye vanotengesa | ORIENT
Mashandisiro ekushandisa Press Ropa lancets?
Iye zvino mazuva vanhu vazhinji uye vazhinji vanoteerera zvakanyanya hutano hwavo uye vanoenda kuMedical Center kunopa hutano hwavo kuti vaongorore zvizere. Nekuda kweichi chikonzero kudiwa kweropa lancet inguva nhatu kupfuura nakare. Mashandisiro eropa lancet akave akakosha kwazvo. Mashandisiro eropa lacet saftly yakawedzera kukosha.
Iye zvino ngatidzidze kushandisa mashandisiro eropa lancet.
Mashandisiro ekushandisa Press Ropa Lancet
Nhanho 1 Dhonza chivharo chekudzivirira uye rasa uye chengeta chivharo munzvimbo yakanaka.
Nhanho 2 Isa iyo lancet fimly inopesana nenzvimbo yekubaya kuti iite. Usabvisa chishandiso kusvikira kunzwika kwanzwika.
Nhanho 3 Dzinga iyo lancet yakashandiswa mune yakakodzera sharps mudziyo ine kapu pane lancet.
Dhinda 2 lancet yeropa
Nhanho 1 Twist cap kusvika yapatsanuka zviri nyore kubva kune lancet muviri. Usadhonza.
Kana iwe ukaidhonza, tsono ichadzingwa uye iyo lancet inozoshandiswa lancet;
Nhanho 2 Nhanho 2 Isa iyo lancet fimly inopesana nenzvimbo yekubaya kuti iite. Usabvisa chishandiso kusvikira kunzwika kwanzwika.
Nhanho 3 Dzinga lancet yakashandiswa mune yakakodzera sharps mudziyo. Iyo lancet yakashandiswa inogona kunge iine ropa rakawanda pairi.
Ruzivo rweORIENTMED ropa lancet
ORIENTMED inogona kupa lancets akasiyana eropa. Twist lancet, Press lancet, akasiyana marudzi e lancets akachengeteka, uye Heel lancet. Iwo maLancets eropa akatowana iyo CE ISO uye FDA chitupa.
Kubva pamhando yepamusoro uye nemitengo inonzwisisika, takakunda mukurumbira mumatunhu akasiyana siyana, seGerman, France, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, South Africa, United States, maodzanyemba kweAmerica zvichingodaro. Kunyanya muChile neMid-kumabvazuva, isu tine vatengi vazhinji.